Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha / WOWOW 8 Qalabka tubada Musqusha oo Fidsan oo Burbursaday Nickel
qiimeeyay 4.95 out of 5 ku salaysan 20 ratings macaamiisha
laba qabashada tubbada musqusha ee baahsan ayaa buuxin kara baahiyaha kala-beddelashada biyaha kulul iyo qabow oo kala duwan, cusbooneysiinta qurxinta musqusha, waa doorashada ugu fiican adiga!
2320300 tilmaamaha rakibaadda
Ka sokow, qasabadda musqusha ee nadiifisay nikkel baahsan waxaa lagu dhammeeyay dusha nikeliga la caday. Ma aha oo kaliya dhammeystirkaani inuu ku siinayo taabasho qurux badan nashqadda musqushaada, sidoo kale waa mid u adkeysata. Dhamaadka nikkel-ka ee la caday ayaa ka hortagaya qoyaanka iyo xoqida, taas oo ka dhigaysa qasabadda musqusha tubada nikkel ballaarinta xoqid- iyo wasakh? Sidaa darteed waa raaxeysane furaha-hooseeya ah ee musqushaada, taasi way fududahay in la nadiifiyo adigoo maro ku tirtiraya. Fudud sida tan!
SKU: 2320300 Categories: Qubeyska Musqusha, Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha Tags: 2 Gacmaha, Nickel caday
Qiimo weyn qiimaha. Jajabka kharashka. Waxay u egtahay wax fiican Tallaabada gacmaha waa mid siman oo adag. Xusuusnow in xuubku uusan wareegi karin. Si gaar ah uma aanan baarin taasi dhibna ma ahan, laakiin kuwa aan badalay ayaa muuqaalkaas lahaa.
Super fududahay in la rakibo. Kaliya ka taxaddar marka aad ku dhejineyso qadadka sahayda si aad ula tacaasho dhibcaha sahayda. Isticmaal laba wren si aad isugu dhajiso. Taas ka sokow, qasabad aad u fiican. Waa hagaag iibsiga!
Waxaan ku jiray miisaaniyad adag waxaanan ku dhammeeyey tan tan aan ugu dooranayo qasabadda musqusha. Waan jeclahay dhererka iyo naqshadaynta fudud, waxaa la rakibay ku dhowaad bil hadda waana u shaqaysaa si dhammaystiran. Waxaan si adag ugu talin lahaa!
waxaan dib u cusbooneysiineynaa guri kiro ah oo aan dhigno suuqa si aan u iibino bisha soo socota. Waxaan ka iibsanay musqusha wax aan waxba tarayn bakhaarka weyn ee maxaliga laakiin qasabadaha aad ayaa loo qiimeeyay. Waxaan ku baaray WOWOW oo waxaan ku go'aansaday midkaan. Qasabad weyn oo raadisa gaar ahaan qiimaha. Aad ayey u fududahay in la rakibo oo dhammaan qaybaha aan u baahanahay waa lagu daray.
Tani waa tan ugu fiican tuubada qiimaha ugu fiican! Dhamaanteed waa bir leh bir-riix-riix-dhan iyo bir hoosaad leh weel qabad leh! Mar dambe nadiifin mayso tuubbooyin timo!
Mid ka mid ah wax iibsigii ugu fiicnaa illaa iyo hadda ee sare u qaaday muuqaalka musqusha. Geyn deg deg ah .. rakibo fudud. Tayo isku mid ah sida aad ku bixin laheyd labanlaab Guriga Dukaanka. U hel dhammaan qiimaha lacagtaada. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay iibsashadayda.
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka baaray khadka tooska ah si aan u helo tuubada. Waa qiimo ka jaban kuwa aad ka hesho bakhaarada waaweyn ee qalabka, mana aanan u hurin wax alla wixii aragti ahaan ah. Waa qurux badan tahay. Xaqiiqdii mar labaad ayaan ka iibsan lahaa sumaddan.
Dhab ahaantii rakibo fudud iyo tayo hufan iyo qaab. Isbarbar dhig qasabadaha kale ee aan ka helay Bakhaarka Guriga, kani xaqiiqdii waa mid u qalma in lagu iibsado qiimo aad u sarreeya laakiin qiimo badh ah. Waxaa lagula taliyay asxaabteyda sidoo kale
Jecel qasabada. Rakibaadda way fududahay marka laga reebo inaan ku helno tuubbooyin dhaadheer saxankayaga gaarka ah. Waxay u egtahay oo dareemaysaa ugu yaraan labanlaab qiimaha la bixiyay. Tuubada ayaa si qurux badan loo soo baakadeeyay taas oo ah faahfaahin yar laakiin wax walba ka sii fiicnaatay. Mahadsanid!
Aad u fududahay in la dhigo. Xitaa xitaa waxay leeyihiin galoofyo horayba ugu jiray sanduuqa. Waxay igu qaadataa hal saac inaan ka saaro wixii hore: (. Iyo 15mins oo mid cusub gasha, btw anigu ma ihi tuubiste, kuleyl ama qabow waxay calaamadeeyeen mid aad u cad. Ma khaldami karo. Guud ahaan, waa qiimo cadaalad ah
Tuubada iyo gacmaha ayaa si fiican loo duubay si looga hortago xoqida. Labada tuubbo iyo gacmeedba waxay ka samaysmeen naxaas cimri dherer khadadkuna waxay ahaayeen bir. Si kastaba ha noqotee, waxaan dib ugu soo celiyay kooxdan cillad weyn. Bullaacaddu wey weyneed weyna wey weyneyd dalool cabbirkoodu aad u yaraa. Dheecaanka bullaacaddu wuxuu ka sameysnaa caag miisaanka culus, ee ma ahayn bir.
Markuu ninkeygu eegay dhammaan qeybahan markii ugu horreysay, wuu xanaaqay oo dhaartay. Laakiin markii uu dhammeeyey rakibaadda qasabadda, wuxuu durbaba amaanay qofka naqshadeeyey qasabadda oo uu weydiiyey sababta qalabka musqusha oo dhami u fiicnayn. Waan ku faraxsanahay inaan xushay qasabadan. Fudeedka ka sokow, waxaan u maleynayaa inay qurux badan tahay. Tani waa qaabkii aan raadinayey.
Waxaan u soo iibsanay badeecadan beddelka nidaamkeenii hore ee tubbada, badeecaduna waxay la kulantay dhammaan wixii laga filayay iyo wixii ka dambeeyay! Waxaan rabnay wax umuuqda xarrago, haddana ku habboon qurxinta gurigeenna / mowduuca. Kaliya maahan qasabadani inay u ekaato mid qurux badan, waxay u shaqeysaa si habsami leh waxayna leedahay qulqulka biyaha oo la yaab leh. Waxaan ku rakibay nidaamkan qiyaastii 20 daqiiqo aniga oo aan cid kale iga caawin. Waxaan kula talin lahaa badeecadan qofkasta oo suuqa ugu jira qasabad biyo mareenka casriga ah oo aan god ka gelin boorsadooda.
Waxaan ku beddelay qasnad aad u qaali ah oo loo yaqaan 'hans grohe' (hingaad) tuubada qaybtan. rakibay 15 daqiiqo. super siman, tallaabo waalka fiican. Naqshadeynta ayaa ah mid aad u fiican in laga hortago dhaqdhaqaaqa gacanka iwm miiska dushiisa. qiimo weyn. tuubada kale ee aan badalay waxay ahayd 5x qiimaha kan. Waxaan ahay guri dhise, waxaanna rakibay 100s qasabado. farxad!
Musqusha musqusha. Midabka iyo qaabku waxay umuuqdaan kuwa fiican laakiin qasabada biyaha kulul waa mid aad u adag oo aan si sahal ah u rogi karin waxayna sameysaa buuq iyo sawaxan. Tuubada biyaha kulul aad ayey u shaqeysaa. Dhammaan qaybaha waxay ku jireen sanduuqa, oo labaduba waxay lahaayeen maydhayaal habboon oo si wanaagsan ayaa loo rakibay. Unugga sanduuqa ee gacanta kasta oo biyo qabow iyo qabow ah waa la xiray si aan loo hagaajin karin. Waa cillad soo saar. Haddii kale, biyaha qabow si aad ah ayey u shaqeeyaan, laakiin markii aad rogto hawo-qabadka biyaha kulul waa mid aad u adag oo cabaada ka dibna u oggolaanaya biyaha kulul inay ka soo baxaan tubbada.
Waa maxay farqiga farxadeed ee qasabadani ku muujisay wax aan waxba tarayn! Waxaa loo baakadeeyay si aad u wanaagsan, way fiicantahay in shirkii oo dhameystiran lagu daro, sidoo kale waxaa la siiyay mashiinka saabuunta u dhigma iyo maro nadiifinta. Qalab ayaa loo diyaariyey si loogu dejiyo daboolka salka loogu talagalay gacmaha, sidoo kale, way fiicantahay in kor loo qaado daboolida marka la samaynayo nadiifin qoto dheer oo wasakhda urursan (aan lahayn caday). Qiimo aad u fiican sidoo kale! Si fiican ayaa loo qabtay! Xaqiiqdii waan ku soo laaban lahaa iibsashada mustaqbalka!
sheyga ayaa u muuqday mid aad u fiican. dhibaatada kaliya ee jirtay waxay ahayd in qasabadaha midkood aan si sax ah loo sameyn oo ay shiidi jirtay markasta oo aad daarto ama aad damiso. Waxay ahayd inaan sameeyo xoogaa isbadal ah si aan dhibaatada u xaliyo. sidoo kale qulqulka pop-upka ma soo baxo ku filan si uu ugu oggolaado in biyuhu si dhakhso leh u daataan.
Qasabado aad u qurux badan oo umuuqda inay tayo wanaagsan yihiin. Waxaan aad u jeclaanay waxaan ku dalbanay 2 dheeraad musqusha sayidkeena.
Waan ku faraxsanahay muuqaalka iyo xawaaraha aan ku helnay tan. Rakiibintu xoogaa way adkayd laakiin guud ahaan waxay ahayd xal la awoodi karo oo wanaagsan oo u muuqda dayactirka musqushayada.
Badeecad weyn! Way fududahay in la rakibo qaabkuna wuxuu la socdaa martida martida noo ah. Way ka qurux badan tahay wax kasta oo aan ka helnay dukaamada qalabka maxalliga ah qiimuhuna waa cabsi badan yahay!